. Nitadiavam-bahaolana izany mba ho famaliana ny hetahetan’ny rehetra ka fantatra fa nafindra etsy amin’ny tobim-piantsonana Makis Andohatapenaka nanomboka omaly. Amin’ny maraina manomboka amin’ny 08 ora ka hatramin’ny 12 ora atoandro ihany no miasa ity ivon-toerana ity. Ho an’ireo fiara tsotra dia noferana ho olona miisa 2 ihany no afaka entiny. Ny fiarana orinasa mitatitra mpiasa dia mila mangataka fahazoan-dalana ka manao taratasy ho an’ny minisitry ny atitany. Ahitana ny anaran'ny orinasa, ny lisitry ny fiara hangatahana alalana, ny lisitry misy ny anaran'ny mpiasa, ny taratasy manamarina fa tena ilainao marina ny mivezivezy, izany hoe Taratasy miisa 4 no atao dika mitovy 2, ampirimina anaty “chemise” ary aterina eny Andohatapenaka . Tsara marihina anefa fa ny fandraisana ny dosie dia tsy midika fa azo ekena ny fangatahana, raha ny fanazavana hatrany, afaka 24 ora kosa no fantatra ny valin’izany aorian’ny fandinihana ataona vaomiera manokana. Ny mikasika ny fivezivezena amin’ny alina mandritry ny fotoanan’ny « Couvre feu » (amin’ny 8 ora alina ka hatramin’ny 5 ora maraina) dia tsy mila mangataka alalana fa avy hatrany dia mahazo manao izany ireo mpitsabo sy mpitondra marary. Toy izany koa ny mpitandro filaminana sy ny mpandraharaha miasa amin’ny sehatry ny filaminana sy fampandriana fahalemana.